Fikarohana momba ny firaisana Raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao ao amin'ny Theodosius I | Joseph Biden: Mpitondra Tontolo Kristiana mandritra ny androm-piainana roa - Fikarohana momba ny vatana vaovao
Joe Biden amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao ny Emperora romana kristianina Theodosius I
taorian'ny Joe Biden nandresy tamin'ny fifidianana tamin'ny 2020, vonona ny hanontany momba ny fiainana taloha ho azy aho. Tsy te hijery ny fiainan'i Joe Biden taloha aho talohan'ny fifidianana satria tsy te hanelingelina ny fizotry ny fifidianana.
Niara-niasa aho mpanelanelana amin'i Kevin Ryerson nanomboka tamin'ny taona 2001 ary nahita fa i Kevin dia mampita mpitarika fanahy iray antsoina hoe Ahtun Re, izay naneho ny fahaizany manao lalao taloha miaraka amin'ny fahamendrehana avo lenta.
Rehefa nanontany an'i Ahtun Re aho hoe iza i Joe Biden mety ho taloha, dia nilaza tamiko avy hatrany izy fa i Biden dia ny fanambaran'ny vatana vaovao ny Emperora Kristiana Romana Theodosius I, izay, mazava ho azy, mbola tsy reko mihitsy.
Talenta taloha: ny fahaiza-manao sy ny filan'ny Joe Biden dia taratra amin'ny fiainan'i Theodosius I
Ny fiainan'i Theodosius I dia voarakitra an-tsoratra tsara. Tamin'ny famakiana ny tantaram-piainany, dia misy fiasa roa mitovy amin'i Joe Biden.
Voalohany indrindra, Theodosius I dia mpisolovava mahery vaika sy mpanentana ny fiangonana katolika. Joe Biden dia nirehareha ho Katolika mafana fo.
Faharoa, i Theodosius I dia emperora mpiady. Joe Biden, nandritra ny fotoana lava naha-Senatera amerikana azy, dia "alika", satria vonona hampiasa hery miaramila izy raha ilaina izany.
Ny fiainana taloha an'i Joe Biden amin'ny maha-Theodosius I ahy
Raha toa sarotra ny politika ankehitriny, dia nahery setra kokoa ny fiainan'i Theodosius I. Na dia malemy paika sy mahay mandanjalanja aza i Joe Biden, amin'ny fiainany amin'ny maha Theodosius azy dia mety ho mahery setra izy.
Theodosius dia niaina tamin'ny 350 am.f.i., izay vanim-potoana feno herisetra.
Heveriko fa ny mahasamihafa azy dia ny fahamatoranay amin'ny nofo aman-tany teto an-tany.
Raha te hahalala ny fiainan'i Joe Biden dia mankanesa any:
Theodosius I, fiainana taloha an'i Joe Biden.
Ny fiainana taloha an'i Donald Trump sy Vladimir Putin
Ny fiainana taloha nataon'ny mpanao politika maro ankehitriny dia fantatra fa olom-panjakana fanta-daza tamin'ny fiainana taloha koa. Anisan'izany ireto:
Donald Trump amin'ny maha-teraka ao amin'ny vatana vaovao ny Emperora romana Nero
Vladimir Putin amin'ny maha-Reincarnation an'i Julius Caesar
Fa maninona ny olona malaza no teraka vatana vaovao indray ho olona malaza?
Ara-dalàna raha manontany ny antony mahatonga ireo olona ireo hiakatra amin'ny toeran'ny governemanta lehibe mandritra ny androm-piainana nifandimby.
Araka ny nohazavaina tamin'ny bokiko, Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana, rehefa noforonina toy ny fanahy isika dia nomen'Andriamanitra toetra manokana.
Araka izany, ireo mpanakanto dia tonga nofo indray amin'ny maha-mpanakanto azy, ny mpitendry zavamaneno dia miverina amin'ny maha-mpitendry zavamananaina sy mpanao politika azy ireo indray amin'ny maha-mpanao politika azy sy ireo mpitondra manerantany.
Rehefa tonga nofo nandritra ny androm-piainana maro ny mpanao politika dia nanatsara ny fahaizany izy ireo ka rehefa lasa nofo dia lasa nahomby kokoa.
Reincarnation: Afaka ny ho malaza mandritra ny androm-piainana iray isika ary tsy fantatra amin'ny hafa
Na dia mety manana talenta sy fahaiza-manao mitovy amin'ny fiainana rehetra aza isika, dia mety ho malaza mandritra ny androm-piainana sasany fa tsy fantatry ny hafa.
Ohatra, fiainana taloha ho an'ny filoham-pirenena Donald Trump dia voamarina izay naha tompon'andraikitra frantsay an'ny governemanta tany atsinanan'i Canada fony i Frantsa nanjanaka ity faritry Amerika Avaratra ity, tamin'ny vanim-potoana nisian'ny ady revolisionera amerikana.
Izany no antony itenenan'i Kanada amin'ny fiteny roa, izay miteny frantsay any amin'ny faritany atsinanan'ny Quebec, raha miteny anglisy kosa ny ambiny any Canada, tahaka ny fanjanahan'i Angletera ny faritra andrefan'ny Canada.
Raha fintinina, ny olona iray dia afaka manana talenta sy fahalianana ary filana mitovy amin'ny androm-piainany iray hafa, nefa afaka ho malaza mandritra ny androm-piainany iray ary somary tsy fantatra amin'ny hafa.
Raha hijery tranga hafa momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray, mankanesa any:
Raharaha momba ny fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray ny mpanao politika
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Misy fitoviana amin'ny endrik'i Theodosius I Joe Biden
Ny filan'ny fiainana taloha, ny talenta ary fahaiza-manao: Theodosius I dia mpitondra an'izao tontolo izao toa an'i Joe Biden